Ọ bụ Ọchịchị, M nọ na Crackberry | Martech Zone
Mgbe ọnwa na ọnwa nke akparịta ụka, m mechara mee akwụkwọ ahụ ma zụta a Blackberry usoro 8330 n'abalị a na Verizon ụlọ ahịa.
Anọ m na-eji Samsung ihuenyo mmetụ maka afọ gara aga ma Agbaghara oku a na-apụghị ịgụta ọnụ, enweghị ike ịmekọrịta kalenda, enweghịkwa ike iguzo na-ele ya anya iji zaa oku.
Abụ m nnukwu onye ofufe Apple, mana ejiri m iPod Touch na ọnwa gara aga iji hụ ma enwere m ike iji ihuenyo mmetụ aka. Enweghị m ike. Maka ndị gị na-asị na ọ na - akawanye mfe, ọ bụghị ya… Achọghị m ekwentị nke m ga - ele anya iji rụọ ọrụ ya.
IMHO, ọ dị m ka mmetụ ihu emetụla anyị azụ, ọ bụghị n'ọdịnihu.
Nko, otutu ndi enyi m kwagara na Blackberry. Chris Baggott, Onye isi oche nke Compendium ọbụna tufuo ya iPhone laghachi a Blackberry. Adam Small, onye isi nke Ekwentị mkpanaka, na-agba m ume igwa m Blackberry nwa oge. Enyi ohuru Vanessa Lammers gwara m na o nwere obi ụtọ na Blackberry ya.
Heck, ọ bụrụ na President Obama enweghị ike ime na-enweghị Crackberry ya, enwere m ike iche n'echiche oke ọrụ na ngwaahịa a. N’abalị taa, m na-achọpụta otu esi eme ma kpọọ oku ekwentị. Dị ka Adam kwadoro, m ebudatara Twitterberry ka m wee nwee ike tweet site na ya!
So… all unu Crackberry-addicts, mee ka m mara ọkacha mmasị gị ngwa ọdịnala!
Tags: ahrefsụlọ ọrụ ikikeikikegbanye ọkụnsuso n'usoromwube wordpress
Jul 1, 2009 na 11:00 PM
Ekele maka ịbụ onye ntụgharị. Ekwesịrị m ekwenye na gị gbasara ihuenyo mmetụ. Na Sọnde kwalite Blackberry m na ihuenyo mmetụ Storm ma hụ ya n'anya. Achọpụtara m na ọ dị mfe iji yana ịnweta ihe nchọgharị weebụ zuru oke.
Aga m ekwupụta na afọ abụọ gara aga mgbe m gbanwere Blackberry mbụ m na-agwa enyi m banyere ya ma kwuo na ya amaghị ihe kpatara ndị mmadụ ji chọọ ha. Daybọchị mgbe m gachara nke m, m kpọrọ ya na nke ọhụrụ ya.
Jul 1, 2009 na 11:16 PM
Emela ka m nwee echiche nke abụọ! 🙂
Jul 2, 2009 na 6:22 PM
Adịkwara m na Blackberry. Enwetara m Oké Ifufe ahụ
Jul 1, 2009 na 11:05 PM
Dịrị gị mma! Ekele maka mkpebi gị!
Maka twitter, nkwụghachi m bụ UberTwitter… na nke ahụ bụ ihe ịchọrọ. Ihe omuma nke ndi ala diri iji gaa.
Enwee obi ụtọ na usoro gị… ọ bụ hel nke ngwaọrụ!